म त सुतिरहेको थे ! मध्यरातमा बर्खास्त भएकोमा सरप्राइज लाग्याे : जितेन्द्र सोनल - नेपालबहस
म त सुतिरहेको थे ! मध्यरातमा बर्खास्त भएकोमा सरप्राइज लाग्याे : जितेन्द्र सोनल
| ६:४५:३६ मा प्रकाशित
२४ जेठ, काठमाडौं । बर्खास्त भएका प्रदेश २ का नि वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आफ्नो पद मध्यरातमा बर्खास्त भएकोमा सरप्राइज लागेको बताएका छन्। उनले भने, म त सुतिरहेको थे। समाचार आएपछि धेरै जनाले फोन गरे। औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन।
केन्द्रमा विवाद चुलिएका बेला प्रदेशमा मन्त्री बर्खास्त गरिएको हो। ठाकुर पक्ष केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुँदा उपेन्द्र पक्षको विरोध छ। पार्टीका दुबै समूहले अहिले एक अर्कालाई कारबाही नै गरेका छन्। सरकारमा रहेर सन्तोषजनक काम नगरेकोले १ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी ४ जनालाई पदबाट बर्खास्त गरिएको जनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठन गर्ने तयारी
अब प्रदेश २ सरकारमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सहभागी गराउने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकाे तयारी छ । पार्टीभित्र चर्को विवादका बाबजुद ठाकुर पक्ष शुक्रबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका राजेन्द्र महतोलाई उप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । महन्थ पक्ष केन्द्र सरकारमा सहभागी भए लगतै जसपा अध्यक्ष यादव जनकपुर पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठन गर्ने यादवको तयारी छ ।
यसबारे कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भइसकेको जसपा स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रदेश २ का नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ । सत्ता सहकार्यको बारेमा छलफल भएको छ, तर ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । यसका लागी आज पनि बैठक बस्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नेपालबहस डटकमलाई बताए ।
उनका अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् । तर जसपा नेताहरुले भने राउतकै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भइसकको बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहले पनि सत्ता सहकार्यबारे छलफल भइरहेको बताए । अहिले भइरहेको छलफलअनुसार सहमति जुटेमा सरकारका लागि चाहिने बहुमत पुग्छ । प्रदेशमा हाल कायम रहेको १०४ सांसदमध्ये जसपाका ३६ सांसद राउतको पक्षमा छन् । कांग्रेसका १९ र माओवादीका ८ सांसद थपिँदा ६३ पुग्छ ।
मुख्यमन्त्री राउतबाट योग शिविर शुभारम्भ ६ दिन पहिले
सञ्चारगृहको विकास हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री राउतकाे जोड ५ महिना पहिले
विवाहपञ्चमी महोत्सवका अवसरमा मुख्यमन्त्रीद्वारा शुभकामना ६ महिना पहिले
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको फेसबुक पेज ह्याक, कभर र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन ७ महिना पहिले
शुक्रबार पैगम्बर हजरतको जन्मदिनमा प्रदेशमा विदा, मुख्यमन्त्री राउतद्वारा शुभकामना व्यक्त ८ महिना पहिले
स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइ पूजा आराधनामा सहभागी हुन आग्रह ८ महिना पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अवितरित हकप्रद लिलामी ल्याउँदै १ मिनेट पहिले
मलाई त तै सुवा मन पडी बजारमा सार्वजनिक १५ मिनेट पहिले
योग परम्परालाई नयाँ उचाइबाट अघि बढाइनुपर्छः उपप्रम पौडेल १९ मिनेट पहिले
अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयरमा असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने १९ मिनेट पहिले
सल्लेरीका विस्थापित परिवारलाई हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्याइयो २४ मिनेट पहिले
अमेरिकाको अलाबामामा भएको दुर्घटनामा परी ९ बालबालिकासहित १० को मृत्यु ३४ मिनेट पहिले
नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ३ लाख १७ हजार कित्ता खरीद माग ४२ मिनेट पहिले
रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ रेटिङ सम्पन्न ५८ मिनेट पहिले
टुकोनले श्रममन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र १८ घण्टा पहिले
बंगलादेशमा थप एक महिना लम्ब्याइयो लकडाउन ४ दिन पहिले
दोर्दी खोलाले १४ घर बगायो, ५० घर उच्च जोखिममा ५ दिन पहिले
प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट उठाउन सकेन बक्यौता २ हप्ता पहिले
कोरोना कहरमा गर्भवती र सुत्केरी ४ हप्ता पहिले
झापामा ७ अर्ब १८ करोड सङ्घीय बजेट ३ हप्ता पहिले
गृह मन्त्रालयलाई अत्याधिक बजेट विनियोजनः हातहतियार खरिद की निर्वाचन ? ३ हप्ता पहिले
फिफाको वरीयतामा नेपाल यथावत ४ हप्ता पहिले
कोरोना महामारीले योगको महत्व झन् बढ्योः प्रदेश प्रमुख कलौनी ३ घण्टा पहिले
पोल्याण्डमा राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै प्रदर्शन ११ महिना पहिले
समृद्धितिर लम्कँदै दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी ४ महिना पहिले
लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार कायमै ८ महिना पहिले
काठमाडौं र धनुषाबाट लागूऔषधसहित ३ जना पक्राउ ४ महिना पहिले